Trend in manicure arooska 2022 | Bezzia
Isbeddellada manicure-ka arooska 2022
Susana godoy | 12/05/2022 16:00 | Aroosyada
La isbeddelka manicure arooska 2022 ayaa sidoo kale hadlay. In kasta oo ay run tahay in gabadh kastaa ay xidhato wax kasta oo ay ku dareemayso raaxada ugu badan, haddana kama fogaan karno inaan ka hadalno fikradaha qaarkood oo ka sarreeya kuwa kale. Sidaa darteed, haddii maalinta arooskaadu ay dhowdahay, waxaad mar walba fiirin kartaa iyaga, sababtoo ah waxaa lagugu dhiirigelin karaa inaad bedesho qaabkaaga.
Waxay u muuqataa in sanadkan qaar ka mid ah midabada aan aragno maalin kasta oo toddobaadka ah ayaa dib ugu soo laabtay moodada. Laakin waa in aroosyada, jebinta fikradaha aasaasiga ah sidoo kale waa doorasho weyn. In kasta oo sida aanu nidhaahno, had iyo jeer waa inaad dhab ahaantii aado sidaad jeceshahay. Sababtoo ah waa maalin si buuxda loogu raaxaysanayo. Soo hel dhammaan isbeddellada manicure ee aroosyada!
1 Isbeddelka manicure arooska 2022: midabka burgundy
2 Manicure cas oo xamaasad leh
3 Cidiyaha leh dhalaal dheeraad ah
4 Manicure oo leh dhejisyo sidoo kale waa isbeddel ku yimaada manicure arooska 2022
Isbeddelka manicure arooska 2022: midabka burgundy
Maxaynu aad ugu jecelnahay midabka burgundy? Waa hagaag, sababtoo ah waxay u taagan tahay, waxay noqotaa wax ka badan aasaaska waxayna sidoo kale ku daraysaa in xarrago aan aad u jecelnahay. Markaa waxaas oo dhan, oo aan yarayn, waxay isu dhigtay mid ka mid ah midabada aasaasiga ah marka aad dooranayso manicures. Laakiin dabcan, hadda waxaan ka hadlaynaa aroosyada, kuwaas oo inta badan had iyo jeer calaamadeeyay midabyo khafiif ah. Waa in la xuso in mid kasta oo iyaga ka mid ah ay noqon karaan kuwo moodi kara fikrad sidan oo kale ah, laakiin haddii aad ka fekereyso inaad xirato dhar midab leh oo midab leh ama laga yaabee kabo sidoo kale 'kala duwan', ka dibna sharad fikradda ah Bordeaux Si la mid ah haddii arooskaagu uu yahay dayrta. Waad ku guuleysan doontaa hubaal!
Manicure cas oo xamaasad leh
Waxay ka fekereysaa midabka cas iyo dabcan sidoo kale ku biirista aroosyada. Sababtoo ah kiiskan, dhamaystirka ugu badan ee canabka ah ayaa joogi kara, inkastoo aysan had iyo jeer ahayn inay sidaas noqoto. Manicure cas iyo pedicure waxay noqon karaan dhammaystirka ugu fiican ee bushimaha hadh isku mid ah.. Waxay siin doonaan dhammayn farxad iyo xamaasad muuqaalkeenna. Dabcan, ilaa inta qurxinta isha aysan aad u firfircoonayn. In ka badan wax kasta si ay u awoodaan si ay u dheelitiraan muuqaalka aroosadda our. Waa midab farxad iyo madadaalo leh, gaar ahaan xilliyada xagaaga. Ma u qaadan lahayd arooskaaga?
Cidiyaha leh dhalaal dheeraad ah
Haddii aan xusno isbeddelka manicure-ka arooska 2022, ma iloobi karno dhamaadka iftiinka dheeraadka ah. Haa, waxa loogu yeero manicure pearl ayaa soo laabanaya. Waxaa laga yaabaa inaad u garanayso iyada manicure pearly, laakiin waa tan ugu la mid ah, oo waxaad ku raaxaysan doontaa midabada fudud ama pastel, laakiin sida aan ku sheegnay taabashada iftiinka. Dahaarka ugu dambeeya wuxuu ka dhigayaa ciddiyaha inay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan, markaa haddii aan ka hadalno arooskeena, ma jiraan wax ka fiican.
Manicure oo leh dhejisyo sidoo kale waa isbeddel ku yimaada manicure arooska 2022
Markaad rabto inaad ku darto taabasho quruxsan laakiin sidoo kale taabasho asalka ah qaybo siman, fikrad sidan oo kale ah ayaa imanaysa. Waa doorasho aad u fiican sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa ciddiyaha dhejiska. Haa, faahfaahintaas yar ee aan ka heli karno mowduucyo aan dhammaad lahayn. Laga soo bilaabo ubaxyada, ilaa dheeman yar. Wax kasta oo aad rabto ayaa had iyo jeer joogi doona. Taasi waa sababta kiiskan, si loogu daro magacyo badan oo iyaga ka mid ah, ma jiraan sida doorashada hooska salka, ciddiyaha, jilicsan. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa midabada sida casaanka pastel ama qaawan iyo xitaa caddaan, taas oo had iyo jeer ah guul. Laga bilaabo tan, waxa ugu wanaagsan in lagu sharadeeyo dhejiyeyaasha qaarkood kuwaas oo sidoo kale fudud iyo haddii aysan ahayn, markaa waxaad ku dhejin doontaa kaliya hal ama laba ciddi oo gacan kasta, ugu badnaan. Sidan waxaad hubaal ahaan ugu raaxaysan doontaa qaabka ugu fiican maalintaada weyn!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » Isbeddellada manicure-ka arooska 2022
Tillaabooyinka ugu fiican ee lagu abuuri karo 'derbiga gallery' adiga kuu gaar ah